(Spain) 06 Luulyo 2020. Barcelona ayaa guul ay u qalantay ka soo gaartay kooxda Villarreal oo ay ku booqatay Estadio de la Ceramica, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-4, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay 1-3 ay ku hoggaamineysay kooxda Barcelona.
Daqiiqadii 3-aad kooxda Barcelona ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta, kaddib markii uu gool iska dhaliyay xiddiga naadiga Villarreal ee Pau Torres.
Laakiin daqiiqadii 14-aad kooxda Villarreal ayaa heshay goolka barbaraha waxaana 1-1 ka dhigay Gerard Moreno.
Daqiiqadii 20-aad Barcelona ayaa markale la wareegtay hoggaanka ciyaarta, kaaddib markii uu Luis Suarez ka dhigay 1-2, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Lionel Messi.
ALLA MUXUU GOOL CAJIIB AH AHAA.. daqiiqadii 45-aad Antoine Griezmann ayaa dheesha ka dhigay 1-3 kaddib markii uu dhaliyay gool il qabad leh oo cajiib ah, waxaana si qurux badan kaga caawiyay Lionel Messi.
Daqiiqadii 86-aad kooxda Barcelona ayaa sii dheereysatay hoggaanka ciyaarta waxaana 1-4 ka digay Ansu Fati, iyadoo uu goolkan ka caawiyay Jordi Alba.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 1-4 ay kaga soo adkaatay Barcelona kooxda Villarreal oo ay ku booqatay Estadio de la Ceramica, Blaugrana ayaana farqigii 7-da dhibcood ahaa ee u dhexeeyay iyaga Real Madrid ku soo yareysay 4 dhibcood.